Iphrofayela Yenkampani - Shenzhen PhiliFast Electron Limited
• Indawo yezitshalo icishe ibe ngamamitha skwele angama-7,500 kanti isibalo sabasebenzi sidlula ama-400.
• Umthamo wokukhiqiza wanyanga zonke ungafika kumamitha-skwele ayi-10,000.
I-PHILIFAST ingumkhiqizi we-PCB okhokhelwayo nomhlinzeki womhlangano we-PCB, Imikhiqizo yethu ifaka i-PCB ejwayelekile emaceleni, emaceleni amabili ne-multilayer, futhi imboza i-PCB eqinile ye-Flex, i-PCB esindayo yethusi, i-PCB yesisekelo sensimbi, i-PCB ehlanganisiwe, i-HDI, nokunye imvamisa amabhodi.
Besilokhu sizibophezela ekukhiqizeni izinto zobuchwepheshe ezisezingeni eliphakeme futhi sithumela eminyakeni engaphezu kwengu-10. Sinebhodi lethu lesifunda le-PCB nebhizinisi le-SMT elihlome umugqa ophelele wokukhiqizwa komhlangano, kufaka phakathi imishini yokuhlola ehlukahlukene, efana ne-AOI ne-X-ray, Ithimba Lethu lobunjiniyela elinolwazi njalo linikeza iziphakamiso futhi lixazulule noma yiziphi izinkinga ekukhiqizeni, Sisekela ekubonisweni ukukhiqizwa ngobuningi kanye nohlelo lwe-fianl firmware, ukuhlolwa komsebenzi ukuqinisekisa ikhwalithi ye-PCBA.